गिट्टी कुटेर तिहार मनाउनु छ::समायोजन खबर
दिक्तेल–खानीडाँडा सडकमा गिट्टी कुट्दै सेती बहादुर राई । तस्विर चिसाङ शेर्पा
तस्विरमा देखिएका बृद्ध रहरले गिट्टी कुटेजस्तो लाग्ला । तर, वास्तविकता त्यो हैन । उहाँको वास्तविकता सुन्दा गला अवरुद्ध हुन्छ, दु :ख लाग्छ । नगरपालिकाले १० केजी चामल दियो, त्यही चामल खाएर घरमा श्रीमती बसेकी छे । चामल सकेपछि के खान, के गर्नेे भन्ने डरले पैसा कमाउन गिट्टी कुट्दै छु । ढुंगाको धुलोले चिराचिरा परेको हत्केला देखाउदै उनले दुःख पोखे । चामल बाहेक केही छैन अन्न ।
गएको असारमा लामो खडेरी लाग्यो, मकै सखाप पा-र्यो, फेरी मकै लगाए, को नि के किराले(अमेरिकन फौजी) पातै खाएर सक्यो । गहत, मसयाम पनि कुहियो, धान र कोदोमा पनि किरा नै लाग्यो, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–३ च्यास्मिटार जोरसिमलका ६७ वर्षीय बृद्ध सेती बहादुर राईले खाल्लेमा गिट्टी कुट्दै पिडा सुनाए । उनको दैनिकी विहानको पहिलो पहरमा भाले बासेपछि साँझ अध्याँरो नभएसम्म दिक्तेल–खानीडाँडा सडकको दायाँबाँयामा बसेर गिट्टी कुट्ने हो ।
गएको असारमा खडेरीले मकै सुकाएर सखाप बनाएपछि उनको मनमा आयो अब के खाने, कसरी पेट पाल्ने, त्यसपछि बाँकी मकैको पातै फौजी किराले खाएपछि भएभरको मकै फाड्दै मिल्काए (फाले) । घरमा खानेकुरा सकिदै गयो । उनले भने, छोराहरु यतै काम गर्छ अनि गिट्टी कुट्ने काम पाईन्छ भन्ने सुने अनि, यहाँ आएको । गिट्टीको थुप्रो माथि वसेर उनले भने । कति कमाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, एक ट्याक्टरको पाँच हजार ।
कति दिनमा बनाउनुहुन्छ, एक ट्याक्टर ? हामी तीनजना छौ, छोरा, बुहारी, नाती, तीनजनाले चार दिनमा एक ट्याक्टर बनाउछौ । घरमा श्रीमती छ । अब यहि गिट्टी कुटेको पैसा लगेर तिहार मनाउने हो । हाँटडाँडामा डेरा लिएर गिट्टी कुट्ने उनले तिहारसम्म कती ट्याक्टर बनाउलान् गिट्टी ? उनको तिहार कस्तो होला त ? यो सवैको मनमा उठ्ने साझा प्रश्न हो । सेती बहादुर जस्तै, सो भेगमा दर्जनौ स्थानीय जिविकोपार्जन गर्न गिट्टी कुट्छन् । गिट्टी कुट्नेहरुको होडबाजी नै छ । गिट्टी कुट्नेहरुले यहि पेशाबाट घर व्यवहार चलाएका छन् । छोराछोरी पढाई रहेका छन् । चाडवर्प मनाईरहेका छन् ।
घरायसी काम सकेर बिहानदेखी साँझसम्म गिट्टी कुट्नेमा दिक्तेल, च्यास्मिटार, उदयपुरका स्थानीयहरु छन् । दिक्तेल बाहिरकाहरु डेरा लिएर बिहानैबाट अबेर साँझसम्म गिट्टी कुट्छन् । उनीहरुले कुटेको गिट्टी निर्माण कम्पनी तथा व्यक्तिहरुले खरिद गरेर लैजाने गर्छन् । नयाँ भवन तथा अन्य काम गर्नलाई गिट्टीको खाँचो हुने र पैसा नहुनेलाई गिट्टी कुटेरै भए पनि पैसाको खाचो केही रुपमा टरेको छ ।
२०७६ कार्तिक ४ गते साँझ ६ :३४ मा प्रकाशित